कैटरीनालाई पनि कपडाले पटक पटक दिएको छ धोका, ढड्ग नपुगेर कि देखाउन खोजेर ? – osnepal tv
कैटरीनालाई पनि कपडाले पटक पटक दिएको छ धोका, ढड्ग नपुगेर कि देखाउन खोजेर ?
एजेन्सी-बलिउडमा नायिकाहरु विभिन्न कारणले गर्दा चर्चामा आउने गर्दछन् । उनिहरुलाई प्रेम तोडिनर जोडिनु कुनै खास कुरा होइन् । आफु चर्चामा आउन एउटा न एउटा फन्डा रचैकै हुन्छन् । बलिउडका नायिकाहरु फेसनकै कारण पनि चर्चामा हुने गर्दछन् ।
कैटरीना पनि आफ्नो सुन्दरता र फेसनकै कारण चर्चामा आउने नायिका हुन् । खासमा उनले फेसनको उचित ध्यान नदिंदा उनलाई पनि धेरै पटक कपडाले धोका दिइसकेको छ। कैफलाई सलमान खानसंग हुँदा पनि कपडाले बारमबार धोका दिएको धेरै उदाहरण रहेका छन् ।
उनि कुनै समाहरोमा उत्ताउलो पहिरनमा नभएता पनि चलचित्र प्रमोशनको क्रममा चाहि बोल्ड अबतारमानै देखा परेकी हुन्छिन् । नायिकाहरुले खासै शरीरभरीको लुगा नलाएकै कारण सार्वजनिक स्थानमै कपडा फुस्किने र ट्रोलको शिकार बनेका हुन्छन् ।
Previous article आज पत्याउनै नसकिने गरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
Next article अज्ञात समूहद्धारा रोकेर राखिएको स्काभेटरमा आगजनी
आज पत्याउनै नसकिने गरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
अज्ञात समूहद्धारा रोकेर राखिएको स्काभेटरमा आगजनी
मनकारी दुई दाजुभाइ जसले गरे स्वास्थ्यचौकी निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा प्रदान
बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा आठ महीनामा बिजुली बल्ने , सिँचाइमन्त्री पुनले गर्नुभयो शिलान्यास